Har’a Ministirii Maallaqaa Yunaayitid Isteetisitti Waajirri To’annaa Qabeenyaalee alaa Ajaja Hooggana Ol’aanaa biyyattii yokaan “Executive Order” 14046, kan haala jireenya namoomaa, mirga dhala-namaa fi lola waraanaa Itiyoophiyaa keessatti babal’ataa deemeef deebii kennuuf bahe irratti hundaa’uudhaan dhaabbatoota afurii fi namoota lama adda-baasuun ugggura irra kaa’ee jira.
Ibsi Ministirii Maallaqaa Yunaayitid Isteetis irraa har’a bahe akka addeessetti, tarkaanfiin har’aa kun dhabbatootaa fi namoota Ertiraa kanneen rakkoo fi waraansa biyya Itiyoophiyaa tasgabii fi waliigaltee biyyattii dhabamsiise keessaa qiida qabanitti xiyyeeffate.
Hookkarri Itiyoophiyaa keessaa marii araaraan akka dhaabatu gochuuf, Yunaayitid Isteetis waahiloota ishee naannoo sanaa fi addunyaa irraa waliin hojjetaa jirti, kan jedhe, ibsichi, humnoonni Ertiraa rakkoo kana keessaa qooda qabaachuun waraansa geggeessamaa jiruu dhaabsisuu fi gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuutti danqaa akka danqaa tahe dubbata.
Dhaabbatoonni tarkaanfiin ugguraa har’a irratti fudhatame, Humna Ittisaa Ertiraa, Adda Uummataa, kan Dimookiraasii fi Haqaa, dhaabbata “Hiddiri Trust” jdhamuu fi kan “Red Sea Trading Corporation” jedhamu yoo tahu, namoonni ammoo Abrahaa Kaasaa Nemariyaam fi Hagoos Gebre-hiwoot W/Kidaan tahuun ibsa kana keessatti himamee jira.
Humni Ittisaa Ertiraa yokaan EDF waraana Ertiraa tahuu kan eere ibsichi, saaminsi qabeenyaa, humnaan gudeeddiin, ajjeechaan siivilootaa fi gargaarsa namoomaa ugguruun yeroo gabaasamee jirutti Humni Ittisaa Ertiraa akka Kaaba Itiyoophiyaa keessa socho’aa jiru dubbata.
Loltoonni Humna Ittisaa Ertiraa yunifoormii waraanaa Itiyoophiyaa duraanii uffatanii of dhoksuudhaan ulaa sakattaa eegu, daandiilee gargaarsaa danqu yokaan qabatanii dhuunfatu, hospitaalota xiqqoo Kaaba Itiyoophiyaa keessaa hojjetan keessaa tokko keessatti hojjetaa fayyaa doorsisan, jedha – ibsichi Ministirii Maallaqaa Yunaayitid Isteetisiin har’a bahe.
Kan Prezidaantii Ertiraatiin Isaayyaas Afawarqiitiin hoogganamu qaamni Adda Uummataa, kan Dimookiraasii fi Haqaa jedhamu paartii Siyaasaa Ertiraa ijoo seeraan beekame. Humna Ittisaa Ertirtaa kan ajajuu fi hoogganu, kallattiidhaan jeneraalota waraanaatti kan ajaja kennu Isaayaas Afawarqii mataa isaa waan taheef rakkoo Itiyoophiyaa Kaabaa keessatti uumameef itti-gaafatamaa ijoodha, jedha ibsi kun. Abaraam Kaasaa Namaariyaam immoo hoogganaa Waajira Tika-nagaa Biy
aalessaa Ertiraa ti. Kan bara 1994 paarticha mootummaa Ertiraatiin hundeessame, dhaabbatni “Hidiri Trust yokaan Hidiri”, kan daldala paartichaa hunda to’atu dha. Hagoos Garehiweet W/Kidaan immoo gorsaa dinagdee paarticha, kan Adda Uummataa, kan Dimookiraasii fi Haqaa jedhamuu tii fi hoogganaa ol’aanaa dhaabbata “Red Sea Trading Corporation” jedhamuu ti.
Tarkaanfii har’a Yunaayitid Isteetis fudhatte irraa kan ka’e, qabeenyaalee fi dantaaleen namoota maqaan isaanii armaa oolitti dhahamee marti as Yunaayitid Isteetis keessa jiran yokaan harka namoota Yunaayitid Isteetis keessa jiran ni ugguramu, Ministirii Maallaqaa Yunaayitid Isteetisitti Waajirri To’annaa Qabeenyaalee alaattis gabaasamu.
Angawoonni Amerikaa fi Chaayinaa Muddamsa Jiru keessatti Dubbachuuf Jiru
Ministiriin Fayyaa Itiyoophiyaa Meeshaalee Hafuura Deddeebisuuf Gargaaru 100 Arjoomtota Irraa Argachuu Beeksise
Labsiin yeroo Muddamaa akka kaafamuu murtaa’e
Muummeen Ministeeraa Itiyoophiyaa akka ABUT waliin marii taasisan dubbachuun isaanii gabasaame